Snoopy Mobile - Download Facebook Videos - GenFB.com
#Snoopy_Mobile branch information
Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch)
Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜(branch)
Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜(branch)
FB URL: https://www.facebook.com/snoopymobileyangon/
ယနေ့ တဖန် ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ LG Mobileထဲက အသုံးပြုရတာလည်းအဆင်ပြေ ဒီဇိုင်းလည်း မိုက်တဲ့ Modelလေးတခုကတော့ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ "LG k10"ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် price. _ 229000 color _ Black,Gold,Titan Display _ 5.3inches,720×1280 pixels Sim. _ Dual sim (46/36) OS. _ Android os, v.7.0 (Nougat) Memory _ 16GB,2GB RAM CPU. _ octa core 1.5GHz Camer. _ 13Mp,5Mp (selfie Wide Angle) Battery. _ 2800mAh Removable Li_ion Launch _ 2017,April
#vivo v7+ ရဲ့ video. အလန်း​လေးပါ ဖုန်းများကိုအရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးနော် ဒါ့အပြင် လက်ဆောင်တွေ ကလည်းသင့်အတွက်အများကြီးပါသေးတယ်ဆိုတော့အိမ်အပြန် ဝိုင်းသယ်ဖို့သူငယ်ချင်းလေးခေါ်ခဲ့အုံးနော် #V7plus = 429000ks Table fan အကြီး (or) hotpot အိုးအကြီး +Hoco Headphone (or) power bank + hotplate (or) ထမင်းပေါင်းအိုး + Selfie Stick + Otg fan + + အရမ်းများတဲ့ Suprise Gifts ) Vivo_V5 = 318000Ks ( Hot Plate မီးဖို + Power Bank +Earphone + Water Bottle + Coffee Cup + Ph Stand + Selfie Stick + Cover + Screen Card + Ring Holder + Sim Card + LED Bulb + အရမ်းများတဲ့ Suprise Gifts ) V5 Lite=268000Kyats (Hotplate or ထမင်းပေါင်းအိုး) + Power Bank + Earphone + OTG Fan + Water Bottle + Selfie Stick + Keychain + အရမ်းများတဲ့ Suprise Gifts ) •Vivo_Y55s=228000 ▶ လက်ဆောင် - အသီးဖျော်စက်sizeအကြီး ✤ Earphone ✤ Power Bank ✤ Water Bottle ✤ LED Lamp ✤ Selfie Stick + အရမ်းများတဲ့ Suprise Gifts ) Vivo-Y53 = 198000 ks လက်ဆောင် ~~~ရေနွေးအိုး *Selfie Stick + အရမ်းများတဲ့ Suprise Gifts ) •Y52=165000ks Gift-(Power Bank + Water Bottle + Ring Holder + LED Lamp + Sim Card + Selfie Stick Delivery Service available ™ Snoopy Mobile(1) ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့် ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile(2)❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile(3)❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜ No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090 Snoopy Mobile(4)( Lanmadaw Branch) အမှတ်- 789 , မဟာဗန္ဓုလလမ်းမ , (13လမ်း နှင့် ဘုန်းကြီးလမ်း ကြား) , City Mart အရှေ့ ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရနန်ကုန်မြို့။ Ph-09965 296090 , 09775 206090 , 09455 206090
Huawei >>သီတင်းကျွတ်အထူး​အစီအစဉ်​🎁 Start Date>>27.9.2017 End Date>>31.10.2017 #At Snoopy Mobile#🎉 သီတင်းကျွတ်ကာလအတွက်​ လူကြီးသူမ၊ဆရာသမားတွေကိုပဲကန်တော့ဖို့စဉ်းစားစဉ်းစား၊ လက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ပဲဝယ်ဝယ် ဆုလက်ဆောင်တွေ၊ အရမ်းတန်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ Huawei သီတင်းကျွတ်အထူးအစဉ် လာပါပြီ။ံHuawei P10 အတွက် 100000ksလျှော့ဈေး၊ Huawei P10 Plus အတွက် Leica Original Cover တို့နဲ့ အတူ တယ်လီနော်internet 18GB ကို (6)လ ဆက်တိုက်လက်​​ဆောင်​နှင့်​အတူ/ံHuawei GR5 2017 အတွက် ကျောပိုးအိတ်လက်ဆောင်၊ Huawei Y7 Prime ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် 32GB SD Card နဲ့အတူ တယ်လီနော အင်တာနက် 6GB နဲ့ ၆နာရီစာဖုန်းပြောဆိုနိုင်ခွင့် လက်ဆောင်၊ံHuawei Y6II Prime ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် Selfie Stick လက်ဆောင်နဲ့အတူ တယ်လီနော အင်တာနက် 6GB နဲ့ ၆နာရီစာဖုန်းပြောဆိုနိုင်ခွင့် လက်ဆောင်၊ Huawei Y5 2017 ကိုယခု 159000ks နဲ့ အင်တာနက်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင် အတူ တယ်လီနော 4.6GB နဲ့ ၆နာရီစာဖုန်းပြောဆိုနိုင်ခွင့် လက်ဆောင်၊ Huawei Y3 2017 ကို109000ksနဲ့ ဝယ်ယူရရနိုင်မယ့်အစီအစဉ် ၊ Huawei Media Pad M3 2017 အတွက် Bluetooth Speaker လက်ဆောင်နဲ့အတူ အော်ရီဒူး အင်တာနက် 36GB လက်ဆောင်၊ Huawei Media Pad T3 10 အတွက် အော်ရီဒူး အင်တာနက် 36GB လက်ဆောင် စတဲ့ ဆုလက်ဆောင်တွေရနိုင်တဲ့အပြင်​ Snoopy Mobile မှ ​ပေးအပ်​တဲ့ လက်​​ဆောင်​ပစ္စည်း​တွေကိုတ​ပွေ့တပိုက်​ကြီး ရယူ နိုင်​ဦးမှာဖြစ်​ပါတယ်​# Huawei သီတင်းကျွတ်​အထူး promotion က October တစ်လလုံးအထိ ဒီလက်ဆောင်တွေရနိုင်မှာနော်။ ~~~~~~ Huawei ~~~~~~~~~ #Huawei_P10plus = 999000Ks #Huawei_P10 = 799000Ks ( Gifts ( Huawei Premium Card + Huawei View Case + (စားပွဲတင်ပန်ကာကြီး or Hotpot အိုးအကြီး) + Power Bank + Umbrella + Hair Dryer + ရေနွေးအိုး + Hoco Headphone အကြီး + ထမင်းချိုင့် + Water Bottle + Ring Holder ) #GR5_(17) 4/64 Premium = 359000Ks ( 399000Ks - 40000Ks = 359000Ks ) (Gifts ( (Hotplate or ထမင်းပေါင်းအိုး + ရေနွေးအိုး + Huawei 2in1 Bag + Hair Dryer + Power Bank + Hoco Headphone အကြီး + Water Bottle + Coffee Cup + Cover + Screen Guard + LED Lamp + Ring Holder + (Sticker Stand or Sim Adapter) + Sim Card ) #GR5_(17) 3/32 = 309000Ks ( Gifts ( (Hotplate or ထမင်းပေါင်းအိုး ) + Huawei 2in1 Bag + Hair Dryer + Power Bank + Water Bottle + OTG Adapter + Ring Holder + Sim Card + Cover + Screen Guard + Sim Adapter + Led Lamp + Ph Stand ) #Huawei_P9 Leica = 459000Ks (559000Ks – 1သိန်း = 459000Ks ) (Gifts ( Remax Cover + Temper Glass + (Hotplate or ထမင်းပေါင်းအိုး ) + Hair Dryer + ထမင်းချိုင့် + Water Bottle + Ring Holder + OTG Adapter + LED Lamp + Sim Adapter ) #Huawei_Y7 Prime = 279000Ks (Gifts ( (Hotplate or ထမင်းပေါင်းအိုး ) + Power Bank + Water Bottle + Earphone + Selfie Stick + LED Lamp + Ph Holder + Sim Card + Sticker Stand + Ring Holder ) #Huawei_Y6(ll) Prime = 229000Ks (Gifts ( (Bluetooth Speaker or Bluetooth Earphone ) + Power Bank + Coffee Cup + Water Bottle + Ring Holder + Sim Adapter + Led Lamp + Ph Holder + Keychain ) #Y5(2017) 4G = 159000Ks #Y5(2017) 3G = 149000Ks (Gifts ( Water Bottle + Coffee Cup + Ring Holder + Power Bank + Led Lamp + Sim Adapter ) #Y3(2017) = 119000Ks (Gifts ( Ring Holder + Led Lamp + Sim Adapter ) #Y6(ll) = 195000Ks ( Gifts ( (Bluetooth Earphone or Speaker ) + Hair Dryer + Water Bottle + Ring Holder + LED Lamp + Sim Card + Ph Stand ) #Y5(ll) = 139000Ks ( Gifts ( Power Bank + LED Lamp + Ring Holder +Screen Guard + Water Bottle ) #Y3(ll) = 99000Ks ( Gifts ( Earphone + Ring Holder + Led Lamp ) *** Huawei Tablet *** #Tab 1 ( 8” )= 159000Ks ( Gifts ( Water Bottle + Ring Holder ) #Tab 1 ( 7” , 8GB ) = 119000Ks ( Gifts ( Water Bottle + Ring Holder ) #Tab 1 ( 7” , 16GB ) = 139000Ks ( Gifts ( Water Bottle + Ring Holder ) #Tab3(9.6”) = 269000Ks (Gifts ( Original Cover + ရေနွေးအိုး + Earphone + Water Bottle + Ring Holder + Sim Card ) #M3= 379000Ks (Gifts --> Original Cover + ရေနွေးအိုး + Earphone + Water Bottle + Ring Holder + Sim Card ) #AyA_Simple_Pay #လစဉ်_ငွေပေးချေစနစ် Delivery Service available Delivery Service available ™ Snoopy Mobile(1) ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့် ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile(2)❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile(3)❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜ No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090 Snoopy Mobile(4)( Lanmadaw Branch) အမှတ်- 789 , မဟာဗန္ဓုလလမ်းမ , (13လမ်း နှင့် ဘုန်းကြီးလမ်း ကြား) , City Mart အရှေ့ ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရနန်ကုန်မြို့။ Ph-09965 296090 , 09775 206090 , 09455 206090
Meet the iphone X ခဏလောက်ကြည့်လိုက်ပါ iphone X မှာဘာတွေပါလည်းဆိုတာ
iphone 8 whole new
ချစ်သော customers အားလုံး ပျော်ရွှင်စရာ Sundayလေးဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးစွာ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော် ဒီနေ့ပြောပြမယ့်modelကတော့ 12လနဲ့ဆိုရင် တလကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် 36100ကျပ်ပေးချေရမယ့် #SonyXperia XA1ပါရှင့် လိုအပ်ချက်များရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရှင့် Screen sizeက5.0inches RAMက3GBပါပါမယ် Internalက32GBနဲ့ရှိပါမယ် Price=369000kyats Cameraက23MP( main camera) တောင်ရှိတယ်/selfieက 8MP ရှိပါမယ်နော် Batteryက2300mAhပါပြီးတော့ ;သက်​လုံစနစ်​နဲ့အမြန်​အားသွင်းနိုင်​ခြင်း(Qnovo Pump Express+2.0)တို့ပါဝင်သေးတယ်နော် CPUကိုoctacore 64bitနဲ့တည်ဆောက်ပေးထားတယ်နော် SIM Typeကnano sim(Dual Sim)/ up to 256GBထိထပ်စိုက်လို့ရတယ်နော် သူရဲ့sim slotကအခြား ဖုန်းတွေကိုpinနဲ့ထိုးစရာမလိုပဲ လက်လေးအသုံးပြုရုံပါပဲ လိုင်းဆွဲအားက4Gထိရတယ်နော် သူလေးရဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကတော့ ကုမ္မဏီကပေးတဲ့ sony headphoneနဲ့sony power bankအပြင်mpt parkage planပါပါမယ် ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးနော်ရှိသေးတယ် ဆိုင်ကပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေလည်းခံစားခွင့်ရှိပါအုံးမယ်ရှင့် လက်ဆောင်လေးတွေကတော့ စားပွဲတင်ပန်ကာကြီး,လျှပ်စစ်ရေနွေးအိူး,led lamp,Sim adapterတို့ထပ်ရဦးမယ်နော် ညီမတို့ရဲ့Snoopy shop address နဲ့ phone number များ Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့် ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜ No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090 Snoopy Mobile ( Lanmadaw Branch)�အမှတ်- 789 , မဟာဗန္ဓုလလမ်းမ , (13လမ်း နှင့် ဘုန်းကြီးလမ်း ကြား) , City Mart အရှေ့ ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။�09965 296090 , 09775 206090 , 09455 206090 အဆုံးထိဖတ်ရှူပေးတဲ့ ချစ် customers များ သာယာချမ်းမြေ့သောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင့်
#designလည်းမိုက် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းတန်တဲ့ #Xiaomi& #Mieizu ဝယ်မယ်ဆိုရင် special price & special gift များပေးနေပြီနော် (5.9.2017) snoopy mobile price list #လစဉ်​​ငွေ​ပေး​ချေမှုစနစ်​ဖြင့်​လည်းဝယ်​ယူနိုင်​ပါပြီ #Delivery_Service 1+ Series #1+5(8/128)(midnight grey)=710000 #1+5(6/64)(grey)=610000 Xiaomiဝယ်ယူသူတိုင်း[Remax PowerBank အစစ် (1year mz official warranty)+Led lamp+sim adapter] •Mi6(6/128)ceramic 18k=550000 •Mimix(256GB)18k=680000 •Mi_Max2(4/64)=300000 •Mi5X(4/32)=260000 •Mi5s(64GB)=330000 •Mi5sPlus(64Gb)=385000 •Redmi_Note5A(3/32)=185000 •Redmi_Note5A(2/16)=149000 •Redmi_Note4X(4/64)=206000 •Redmi_Note4X(3/32)Miku green=195000 •Redmi_Note4X(3/32)=187000 •Redmi_Pro(128)=285000 •Redmi4X(4/64)=185000 •Redmi4x(3/32)=152000 •Redmi4x(2/16)=132000 •Redmi4A(2/16)=115000 •Mi4C(3/32)=155000 •Mi4C(2/16)=128000 •Mi TV 4a-43''-490,000 •Mi TV 4a-49''-560,000 •Mi TV 4a-55''-695,000 •Mi TV 4a-65''-1,070,000 #Xiaomi_1year_official_company_warranty •Mi6(6/64)global=549000 •Mi_Max2(4/64)global=349000 black •Mi_Note2(128GB)global=679000 •Mi5s(3/64)= 359000 •Redmi_Note4(4/64)global=249000 •Redmi_Note4(3/64)= 240000 •Redmi_Note4(3/32)global=219000 •Redmi4X(3/32)global=189000 •Redmi4X(2/16)= 159000 •Redmi4(3/32)=205000 •Redmi4A(2/32)Global=139000 •Redmi4A(2/16)=129000 •Redmi2=111000 ~~~~~~~~~Meizu~~~~~~~~~ #M5note(3/16) = 209000Ks #M5note(3/32) = 229000Ks Gift - ( Heating Pot +Umbrella +Earphone+Sim Adapter+OTG Adapter) #Meizu_MX6 = 339000 Present-->( Earphone + Ring Holder + Selfie Stick + Sticker Stand + Power Bank + Umbrella + Sim Adapter + Led Lamp) #Meizu_M3E = 239000 Present-->( Bluetooth Earphone , Selfie Stick , Ring Holder , Led Lamp , OTG Adapter , Umbrella, Sim Adapter , ရေစိုခံအိတ် ) #Meizu_U10(2/16) = 169000 Present-->>( Power Bank , Meizu Water Bottle , Meizu ဦးထုပ် , Meizu ခေါင်းဦး , Selfie Stick , Meizu ရေစိုခံအိတ် , Meizuယပ်တောင် , Led Lamp ) #Meizu_M5(2/16)=159000 #Meizu_M5 (3/32)=179000 Gift-->>( Power Bank , Selfie Stick , Ring Holder , Led Lamp , Keychain , OTG Cable , Sim Adapter , Sticker Stand) •Meizu_M5s(3/32)=199000 •Meizu_M5s(3/16)=179000 Gift-->>( Power Bank + Water Bottle + Led lamp + Selfie Stick+ Sticker Stand + OTG Cable + Sim Adapter ) •M5c(2/16)=129000 Special Gift-(power bank+Led lamp+Selfie stick+sticker stand+Sim card+Sim adapter) Delivery Service available ™ Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့် ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜ No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090 Snoopy Mobile ( Lanmadaw Branch) အမှတ်- 789 , မဟာဗန္ဓုလလမ်းမ , (13လမ်း နှင့် ဘုန်းကြီးလမ်း ကြား) , City Mart အရှေ့ ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရနန်ကုန်မြို့။ Ph-09965 296090 , 09775 206090 , 09455 206090
Galaxy Note8 video ​လေးပါစွန်း​ကြွေသွားမယ်​​နော်​
VR Gun ရဲ့ Video ပါ၊ Available at Snoopy Mobile phone Accessories ကို ဆိုင်မလာခင် မိမိဝယ်ယူချင်သော ပစ္စည်းလက်ကျန်ရှိမရှိ ဖုန်းဆက်ပြီးStock မေးပေးဖို့ အနူးညွတ် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ Phone Accessories ကို Delivery ပို့ပေးနေပါပြီ။ ပို့ခ ကတော့ မြို့ နယ်အလိုက်ဈေးကွာခြားပါတယ်ရှင်။ အသေးစိတ်ကို ဖုန်းဆက်၍စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ #AYA_Credit_Card #AYA simple pay #လစဉ်_ငွေပေးချေစနစ် Delivery Service available ™ Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့် ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80
#Xperia_XA1=369000 video လေးပါကြည့်အုံးနော် Special Gift-(Sony MDR-ZX310AP+ Sony original power bank(10000mAh)+စာပွဲတင်ပန်ကာအကြီး+လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုး+cover+Screen guard+Led lamp+Sim adapter+Mpt package plan) #Snoopy_Mobile တာမွေတွင်စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ #AyA_Simple_Pay #အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ မင်္ဂလာပါ Display-5.0inches Resolution-(720*1280) Ram3GB / internal 32GB Camera primary 23MP Secondary 8MP Battery 2300mAh USB-TypeC Zawgyi font Ok Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့် ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜(branch) No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090
#AyA_Simple_pay #အရစ်ကျစနစ် #Galaxy_TabS3=918000 Gift-(power bank+Led lamp+ လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုး + otg cable+sim adapter) မင်္ဂလာပါ Snoopy Mobile တွင်အသစ်ရောက်ရှိလာသည့်Samsung galaxy TabS3 Tamwe branch တွင်စတင်လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါပြီ TabS3 ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင် ရှေ့နောက်မှန်ကိုမှ Collin golila glass4မှန်သားကိုအသုံးပြုပေးထားသောကြောင့်အဆင်းရာအခြစ်ရာခံတဲ့အကြမ်းခံတဲ့မှန်ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ် TabS series တွေထဲမှာမှပထမဦးဆုံးSpen ပါရှိလာပြီး Spen ရဲ့ထူးခြားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Camara ကိုအရှေ့Sefile ကို 5magapixl ,အနောက်back Camara 13 magapixal ကိုမှ SuperAmoled ကိုသုံးပေးထားသောကြောင့်ကြည်လင်ပြတ်သားလှပတဲ့ပုံလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရိုက်နိုင်ပြီး Internal Memory 32 ကိုမှ256GB အထိထပ်တိုးအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ဓာတ်ပုံတွေ,video,တွေမိမိစိတ်ကြိုက်ဖိုင်တွေကိုသိမ်းဆဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Ram 4ကိုအသုံးပြုပေးထားသောကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေမြန်ဆန်တဲ့အပြင် Appတွေကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် အသံပိုင်းမှာဆိုရင် AKG Speaker ကို Qued Speaker ကိုအသုံးပြုပေးထားသောကြောင့်ကိုနားထောင်ချင်တဲ့အသံတွေကိုလည်းကြည်ကြည်လင်လင်ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အပြင် UHQအသံစနစ်ပါထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါသည်Bettery 6000 ကိုအသုံးပြုပေးထားသောကြောင်ုဂိမ်းဆော့ရင်းအင်တာနက်အသုံးပြုရင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် Bettery ကြာကြာမခံမှာကိုပူမနေရတော့ပါဘူး အင်တာနက်ဘဲသုံးသုံးဂိမ်းဘဲဆော့ဆော့ လုပ်ငန်းဘဲသုံးသုံး ကျောင်းဘဲသုံးသုံး အလွန်ကောင်းတဲ့Tab တစ်လုံးဖြစ်သောကြောင့်လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Display: 9.7 SuperAmoled Camara:13magapixal back, Sefile 5magapixalMemory : Ram4,Rom 32 Qued Speaker AKG Spen ပါပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Delivery Service available ™ Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့်ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80
#AyA_Simple_Pay #အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ huawei_P10=799000 -huawei_P10Plus=999000 #Special_Gift- (Huawei_A1 smart band+ စာပွဲတင်ပန်ကာ+ Electronic Kettle+ Led lamp+ sim adapter+Sim card+huawei View Case+Premium Card)
#REMAX ရဲ့ 🚴🏀️⚽️အလန်းစား Sport Type Series Bluetooth နားကြပ်လေးတွေကနေ ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် လွတ်လပ်တဲ့ သံစဉ်ကမ္ဘာငယ်လေးထဲကို #Admin တို့နဲ့အတူ လိုက်ပါစီးမြောခံစားကြည့်ကြပါစို့လား... 🎵🎵🎶 ကဲ... စိတ်လွတ်လပ်မှု ပေါ့ပါးမှု ဆန်းသစ်မှုတို့နှင့် အတူအဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ Remax S-type Series Earphones #Video Clip လေးကို အခုပဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ 😎😎 Model နှင့်​ ​ဈေးနှုန်းများကို ​အောက်​မှာ ကြည့်​ရှုနိုင်​ပါတယ်​ခင်​ဗျာ။ 🏁RB-S2 Sport Bluetooth Earphone > 19,000 kyats 🏁RB-S5 Sport Bluetooth Earphone > 16,500 kyats 🏁RB-S6 Neckband Sport Bluetooth Earphone > 27,500 kyats 🏁RB-S10 Sport Bluetooth Earphone > 25,000 kyats Delivery Service available ™ Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့် ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜(branch) No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့။ Ph-09 965204090 ,09 455 204090
Snoopy Mobile မှနှစ်ကူးအတာသင်္ကြန် Lucky Draw အထူးအစီအစဉ်. . .
#Meizu_M5s(3/32)=199000ဝယ်မယ်ဆိုရင် ~~~အတာသင်္ကြန် အတွက် Lucky7 Draw~~~ Lucky 7ဖြစ်သွားအောင် ဖုန်း7လုံးအထိကံစမ်းပေးမဲ့ အစီအစဉ်လာပါပြီ(30.3.2017-11.4.2017) အထိ #Snoopyဆိုင်ခွဲများဖြစ်သော(တာမွေ-ပါရမီ-မြောက်ဥက္ကာလာ)ဆိုင်ခွဲတိုင်းတွင်Handset ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် handset 7လုံးအထိကံစမ်းနိုင်မည့်အစီအစဉ်ပါ 1-OPPO_F3plus=599000(Selfie king) 2-Huawei_GR5(17)=309000 3-Vivo_Y53=199000 4-Samsung-J2Prime=169000 5-meizu_M3note(32)=199000 6-meizu_M3note(32)=199000 7-meizu_M3note(32)=199000 အထိကံစမ်းပေးသွားမည့်စီအစဉ်ပါ ကံစမ်းမဲကိုလည်းLive လွှင့်ပေးသွားအုံးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ့အပြင် 1သိန်းနှင့်အထက်Offical brand ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်ဗလာမပါ #Snoopy_Mobile ဆိုင်ခွဲတိုင်းတွင်းကြိုက်နှစ်သက်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်ခွင့် Gift card အနည်းဆုံး (10000တန်မှ50000တန်) အထိကံစမ်းနိုင်အုံးမှာပါ ဒါပဲလားဆိုတော့ကျန်သေးတယ်နောက်ထပ်ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲများဖြစ်သုံး အိမ်းတွင်းသုံးပစ္စည်းများ/Discount cardများ / mobile gadget များစွာကို လည်းကံစမ်းနိုင်အုံးမှာဖြစ်လို့ သင်္ကြန်အမှီဖုန်းအသစ်လေးနဲ့ လန်းမဲ့ ကိုကို မမ တွေ #Snoopy_Mobile သို့ လှမ်းခဲ့ပါလို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပရစေနော် ဒါ့အပြင်သက်ဆိုင်ရာ model အလိုက် Company မှပေးသော လက်ဆောင်များကို လည်းရရှိအုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့်ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်မြောက်ဥက္ကာလာ လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜(branch) No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး ,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090
#Galaxy S8 အလန်းဇယားလေးပါ
#AYA_Simple_Pay & လစဉ်ငွေပေးချေမှုစနစ် #Meizu_M5_Note(3/32)=229000 (3/16)=209000 Gift-(အသီးဖျော်စက်+Selfie stick+led lamp+ meizu bottle+ring holder+earphone+sim adapter+Mini fan+otg adapter) Design အပိုင်းမှာတော့ပြောစရာမရှိလောက်အောင်မိုက်နေတဲ့ M5Noteလေးပါ metal body ဖြစ်ပြီးဘေးဘောင်လေးကိုအနည်းငယ်ကွေးထားတဲ့ အတွက် hand feeling ကတော့ အရမ်းကောင်းပါတယ် Battery အပိုင်းမှာဆိုရင် 4000mAh အပြင် fastcharger system ပါ ပါဝင်လာပြီဆိုတော့ စိတ်ကြိုက် internet သုံးgame play အကြားကြီးသာအကြိုက်သုံးတော့လို့ ဒါ့အပြင် Mec sim ပါအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် mec သမားတွေ handset ကောင်းကောင်းရှာရခက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရွှေချယ်စရာဖုန်းလေးဖြစ်လာပါပြီ Specification Display-5.5 Camera-13Mp&5Mp Battery-4000mAh Ram-3Gb Rom-16 version & 32 version Version 6.0 marshmallow ဈေးနှုန်း နဲ့ ပါဝင်တဲ့ specification တွေက တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ် ဆိုတော့ M5 note ဝယ်ဖို့ #Snoopy_Mobile ဆိုင်ခွဲများသို့ လှမ်းလာခဲ့ ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပရစေနော် Delivery Service available ™ Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့်ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜(branch) No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး ,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090
Huawei GR5(17) myanmar idol lucky draw
#Mi5s #1year_Official_warranty Mi5s(4/32)=375000 Mi5s(3/64)=385000 Gift-Remax power bank+Led lamp+simadapter #AYA_Simple_Pay #အရစ်ကျစနစ် နဲ့လည်းအားပေးနိုင်ပါပြီ Mi5s မှာဆိုရင်တော့ Latest Snapdragon821 chipset. ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အမြန်နှုန်းကပြောစရာမလိုအောင်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေမှာပါ Home button ပိုင်းကိုလဲလုံးဝပြောင်းလဲထားပါတယ် qualcomm's Ultrasonic Technology အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် လက်တွေညစ်ပတ်တဲ့အချိန်မှာတောင် finger print ကိုအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှာပါ home button ရဲ့ Design ပိုင်းကလည်းအထာကျနေပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေမှာအမှန်ပါပဲ Screen sizeကတော့ 5.15inches ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တစ်ဖက်နဲ့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမဲ့size လေးပါ Camera ပိုင်းအနေ နဲ့ 12MP sony coms image sensor ကို အသုံးပြုပေးပါတယ် Dual tone Led flash and 4K video recording ပါ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ #Snoopy_Mobile သို့လှမ်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် နော် Available at Snoopy Mobile #AYA_Credit_Card #AYA simple pay #လစဉ်_ငွေပေးချေစနစ် #Free_Delivery_Service_For 10မြို့နယ် Free ပေးသောမြို့နယ်များ ◤ လှည်းတန်း , စမ်းချောင်း , ကြည့်မြင်တိုင် , အလုံ , လမ်းမတော် , လသာ , ပန်းဘဲတန်း , ကျောက်တံတား , ဗိုလ်တစ်ထောင် , ပုဇွန်တောင် ◢ မြို့များFree delivery service ရပါပြီ။ Delivery Service available ™ Snoopy Mobile ❛ တာမွေ ❜(main branch) အမှတ်(50) , ကျားကွက်သစ်လမ်း , ( သတိပဌာန်လမ်း နှင့်ဣစ္ဆာသယလမ်းကြား ) အာသောကဈေးအနီး , တာမွေ , ရန်ကုန်။ Ph - 09 781 996 991 , 09 2530 600 80 01-543373 Snoopy Mobile ❛ ပါရမီ ❜ ပါရမီဆိုင်ခွဲ ~ အမှတ်(17) , ပါရမီလမ်း , ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုး , လှိုင်မြို့နယ် , ရန်ကုန်။ Ph - 09 965 205090 , 09 775 205090 , 09 455 205090 Snoopy Mobile❛ မြောက်ဥက္ကာလာ ❜(branch) No(992),သုဓမ္မာလမ်း,မြောက်ဥက္ကာလာ,ရန်ကုန်,ကန်သာယာကားမှတ်တိုင်အနီး ,အထက(3)ကျောင်းအရှေ့ Ph-09 965204090 ,09 455 204090 တာမွေဆိုင်ခွဲလိပ်စာရှာရန်ခက်ခဲသူများအတွက် Google Map ကနေ Get Directionယူနိုင်ပါပြီအောက်ကLink ကိုနိုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ https://goo.gl/6Tuz3sj
Snoopy နဲ့ Oppo တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို Live လွှင့်ပါပြီ။ ပထမဆု Oppo A39 Mobile Phone ဒုတိယဆု ထမင်းပေါင်းအိုးအကြီး တတိယဆု Keypad Handset နှစ်သိမ့်ဆု Oppo speaker 10 electric kettle 1